Yona 1 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
1 Lafika ilizwi likaYehova kuYona+ unyana ka-Amitayi, lisithi: 2 “Sukuma, uye eNineve+ isixeko esikhulu, uze ubhengeze nxamnye nayo ukuba ububi babo bunyuke beza kufika phambi kwam.”+ 3 Yaye uYona wasukuma waza wabaleka phambi koYehova+ waya eTarshishe;+ ekugqibeleni wehla waya eYopa+ kwaye wafumana inqanawa eya eTarshishe. Ngoko wahlawula intlawulo yayo waza wehla waya kuyo, ukuze aye nabo eTarshishe emke phambi koYehova. 4 Kwaye uYehova wezisa umoya omkhulu elwandle,+ kwaza kwabakho isivuthuvuthu esikhulu+ elwandle; yaye inqanawa yona yayisele iza kwaphuka. 5 Abaqhubi baselwandle baqalisa ukoyika baza bamemeza becela uncedo, ngamnye kuthixo wakhe.+ Kwaye baqhubeka beyilahla elwandle impahla eyayisenqanaweni, ukuze bayenze ibe khaphukhaphu.+ Kodwa uYona wehla waya kumgangatho osezantsi wenqanawa, waza walala yoyi.+ 6 Ethubeni umphathi wenqanawa wasondela kuye waza wathi kuye: “Yintoni ingxaki yakho, thongorhandini? Vuka, memeza kuthixo wakho!+ Mhlawumbi uTHIXO oyinyaniso uya kuzibonakalisa esikhathalele, size singatshabalali.”+ 7 Bathi omnye komnye: “Yizani, senze amaqashiso,+ ukuze sazi ukuba kungenxa kabani na sisehlelwa yile ntlekele.”+ Kwaye baqhubeka besenza amaqashiso, yaye ekugqibeleni iqashiso laphuma noYona.+ 8 Ngoko bathi kuye: “Nceda, sixelele, kungenxa kabani na sisehlelwa yile ntlekele?+ Uyintoni umsebenzi wakho, kwaye uvela phi na? Uvela kweliphi ilizwe, uvela kubaphi na abantu?” 9 Yena ke wathi kubo: “NdingumHebhere,+ yaye ndoyika+ uYehova uTHIXO wamazulu,+ Lowo wenza ulwandle nomhlaba owomileyo.”+ 10 Aza amadoda aqalisa ukoyika kakhulu, yaye ahlabela mgama athi kuye: “Yintoni le uyenzileyo?”+ Kuba la madoda ayazi into yokuba wayebaleka phambi koYehova, ngenxa yokuba wayewaxelele. 11 Ekugqibeleni athi kuye: “Sikwenze ntoni na,+ ukuze ulwandle lusizolele?” Kuba ulwandle lwalusiya lusiba nesivuthuvuthu ngakumbi. 12 Ngoko wathi kuwo: “Ndiphakamiseni nindiphose elwandle, yaye ulwandle luya kunizolela; ngenxa yokuba ndiyazi ukuba kungenxa yam le nto kukho esi sivuthuvuthu.”+ 13 Kodwa la madoda azama ukutyhudisa, ukuze abuyisele inqanawa emhlabeni owomileyo; kodwa akazange akwazi, ngenxa yokuba ulwandle lwalusiya lusiba nesivuthuvuthu ngakumbi.+ 14 Yaye amemeza kuYehova esithi:+ “Awu, Yehova, nceda, masingatshabalali ngenxa yomphefumlo wale ndoda! Uze ungalibeki kuthi igazi elimsulwa,+ ekubeni wena Yehova wenze ngokuvumelana noko uyoliswa kuko!”+ 15 Ngoko amphakamisa uYona aza amphosela elwandle; yaye ulwandle lwayeka ukubhabhama.+ 16 La madoda aqalisa ukumoyika kakhulu uYehova,+ kwaye anikela umbingelelo kuYehova+ aza enza izibhambathiso.+ 17 Ke kaloku uYehova wamisela intlanzi enkulu ukuba imginye uYona,+ waza uYona waba sembilinini wentlanzi iimini ezintathu nobusuku obuthathu.+